Futhi u ... ufunde izincwadi ezingaki? | Izincwadi Zamanje
Izolo ngiphenya ku-twitter, ngiyabona ukuthi abantu abaningi bakhuluma ngezincwadi abazifundile kulo nyaka. Umbuzo wethulwe kusuka kuwebhusayithi enhle Izincwadi Nezincwadi.
Phakathi kwezimpendulo ngibone abantu abathi bafunde izincwadi ezingama-60, 65, 50 noma ezingama-20. Ngaqala ukwenza ama-akhawunti futhi labo abathi bafunde izincwadi ezingama-60 noma ngaphezulu, baphuma baba ngaphezu kwencwadi eyodwa ngesonto. Ngakho-ke ngiqale ukubuyekeza ukufundwa kwami ​​kusuka ngo-2014.
Enombolweni akuyona into ehehayo, kepha kunokuthile okungidonsele amehlo: angizikhumbuli zonke izincwadi. Ukufundwa kwami ​​kwenziwa ngezincwadi zami, lezo engiziboleke emitatsheni yezincwadi nezinye engibolekiswe zona.
Yebo, ngiye ngabheka okwami ​​njengoba ngibabona eshalofini lami futhi kwanele ukubheka ukukhumbula okuthile kwalokho kufundwa. Kepha kulabo engingenabo, ngiyavuma ukuthi kukhona engikukhohliwe.
Ngazibuza-ke ukuthi yini iphuzu lokuzibuza ukuthi zingaki izincwadi engizifundile ngonyaka lapho kucacile ukuthi eziningi zazo azishiyanga uphawu lwazo kimi. Kungakho ngiwuphendula kabusha lo mbuzo: Zingaki izincwadi ezishiye uphawu lwazo kimi kulo nyaka? Umbuzo ushisa ngokwengeziwe kepha mhlawumbe unembe kakhudlwana.
Kulo nyaka kufanele ngivume ukuthi ngithole umbhali ebengimthanda kakhulu futhi engifunde ngaye imisebenzi emibili: U-Isaac Rosa. ngithenge Igumbi elimnyama futhi ngathatha ukubolekwa Enye inoveli yempi yombango eyadalwa nguNkulunkulu!
Owokuqala ungenze ngahlala ngokusola phambi kwekhompyutha (funda, kunconyelwa kakhulu) bese kuthi okwesibili ngibheke ibhukwana lanoma yimuphi umbhali ofisayo (phakathi kwalokhu engizithola ngikhona).
Ngikhumbula futhi ngifunda ngiphinda ngifunda futhi ngisebenzisa izinkondlo zezingane ezifundweni zami Umhlaba ongenamagama de UBianca Estela Sánchez. Incwadi emnandi ebike yangiduduza kwesinye isikhathi ngenxa yobuhle bayo nemicabango yayo.
Ekugcineni ngizokuveza ukuthi lo kube unyaka lapho ngathola khona umdlalo omuhle wekhulu lama-XNUMX leminyaka laseSpain: Izibani zeBohemian, of URamón María del Valle Inclán. Ngayifunda kabili, ngamangala ngalobu buciko obumangalisayo.
Yize ngifunde okuningi okuningi, uma ngibheka emuva, lezi yizihloko zokuqala ezifika engqondweni.
Futhi u ... zingaki izincwadi ezishiye uphawu lwakho kulo nyaka?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Futhi u ... ufunde izincwadi ezingaki?
U-Aida Ramos kusho
Kulungile kulo nyaka nginqume ukuthi ekugcineni ngifunde okudala. Iminyaka eyikhulu engcono kakhulu yokuba wedwa nokuthi insimbi ikhalela bani, futhi ngabona ukuthi zibalulekile ukuze zifunde ukuba umbhali omuhle. Jabulela unyaka omusha!
Phendula ku-Aida Ramos
Izindaba zikaMagar kusho
Abokuqala abafika engqondweni ngenxa yonyawo abangishiyile ngalo:
- «Usilika» kanye ne "Crystal Lands" ngu-Alessandro Baricco
- "Indoda endala nolwandle" ngu-Ernest Hemingway
- "Igazi Pact" nguMario Benedetti
- "The Princess Bride" nguWilliam Goldman
Ibhalansi yonyaka wami wokufunda muhle futhi, ngaphandle kokungabaza, lokhu kube ukufundwa okufanele kukhunjulwe.
Phendula ezindabeni zikaMagar
Bengilokhu ngisebenzisa http://www.goodreads.com Iqiniso lisiza kakhulu ukugcina lokho okufundayo, okuthandayo nalokho ofuna ukukufunda, kanye nokuthi kufundwa yini abangane bakho. Iqiniso ukuthi liyathandeka kakhulu
Ngikushiya iphrofayili yami https://www.goodreads.com/user/show/18285062-nacho-morato